को’रोना सं’क्रमणबाट १७ जिल्ला प्रभावित, उच्च जो’खिममा कुन कुन परे ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/को’रोना सं’क्रमणबाट १७ जिल्ला प्रभावित, उच्च जो’खिममा कुन कुन परे ?
को’रोना सं’क्रमणबाट १७ जिल्ला प्रभावित, उच्च जो’खिममा कुन कुन परे ?
काठमाडौं । नेपालमा हालसम्म १७ जिल्लामा को’रोना सं’क्रमण देखिएको छ । मंगलबार एकै दिन ५७ जनामा सं’क्रमण देखिएको छ । जम्मा एक सय ९१ जनामा मा सं’क्रमण देखिएकोमा ३३ जना निको भइसकेका छन् । सबैभन्दा धेरै सं’क्रमित पर्सा जिल्लामा छन् । जहाँ सं’क्रमितको संख्या ६४ पुगेको छ । मंगलबार मात्र ३९ जनामा सं’क्रमण देखिएको थियो । उदयपुरमा ३२, कपिलवस्तुमा २९, बाँकेमा २४, रुपन्देहीमा १६, काठमाडौंमा पाँच तथा कैलालीमा चार जनामा सं’क्रमण भेटिएको छ । बारामा तीन, चितवन, बाग्लुङ र झापामा २÷३ तथा, भोजपुर,बर्दिया, कञ्चनपुर, सर्लाही र सप्तरीमा १÷१ जनामा सं’क्रमण देखिएको छ ।’
लकडाउनका बाबजुत नेपालमा समुदाय तहमा सं’क्रमण फैलिएको छ । जून निकै जो’खिमपूर्ण भएको बताइएकाे छ । छिमेकी देश भारतमा पनि उच्च दरमा बढेको छ । जहाँ सोमबार ४२ सयमा सं’क्रमण देखिएको थियो । भारतमा सं’क्रमितको संख्या ६० हजार नाघेको छ । खुला सी’माका कारण भारतबाट आउनेहरुबाट नेपालमा सं’क्रमण बढेको हो ।
कोरोनाको ‘सकारात्मक’ असर– हात धुने बानी विकास हुँदा सरुवा रोगका बिरामी घटे
वैवाहिक अंगीकृतमा नेकपाको बटमलाइन : बिहेपछि लगातार ७ वर्ष नेपालमै बस्नुपर्छ
एकाबिहानै थप २४ जनामा कोरोना पुष्टि , संक्रमितको संख्या ७, ८७२ पुग्यो